Kubazali, ukuhlamba kuqala kwintsana kubaluleke kakhulu, isiganeko esinoxanduva, akukho mnandi ngaphezu kwegama lokuqala kunye nesinyathelo sokuqala.
Yintoni ekufuneka ibe yiqondo lokushisa kwamanzi? Kwaye xa eqala ukukhala? Kodwa kuthekani xa ephuma? Ndingahlamba njani umntwana osandul 'ukuzalwa okokuqala kwaye ndenze kakuhle, ngaphandle kokwenza amaphutha? Le mibuzo iya kuphendulwa ngamava ezidlulileyo ezikhankanywe kweli nqaku.
Kubuqili ukukhumbuza ngale nto, kodwa into eyona nto kukuba ufuna ukuhlamba. Unokuhlamba kwindawo yokuhlambela umntu omdala okanye kwindawo ekhethekileyo. Ewe, ukuba ungenayo ibhati yokubhinqa, kufuneka uyithenge, okokuqala, kuya kuba lula kuwe, okwesibini uza kufuna amanzi angaphantsi, kuba awuyi kufundisa umntwana wakho kwimihla yokuqala ukuya emsebenzini wokudilika. Kwakhona, ngamanye amaxesha iintsana zinengxaki yesikhumba efana ne-diathesis, i-allertic, i-erythema, njl., Kwaye ukuze ukwazi ukujamelana nale nzingo zikhona izityalo ezikhethekileyo ukuba, ukuba uya kuhlamba umntwana wakho kwindawo yokuhlambela zifuna ngamanye amaxesha. Kwakhona kuhlamba elincinci kulula ukwenza "ukuhlawula amanzi", ngaphandle kokugcina ucocekile kulula.
Icandelo lesibini esibaluleke kakhulu kule shishini ngamanzi. Abantu abaninzi bancomela ukuhlamba umntwana osanda kuzalwa ebhotile okanye, ubuncinane, ngamanzi abilisiwe. Nanku, yonke into incike ekuhlambulukeni kombhobho wakho wamanzi. Sekunjalo, akukho mngcipheko kwaye ubuncinane ubilise amanzi, kwaye ukunciphisa unokusebenzisa ityuwa yolwandle kunye nemifuno ekhethekileyo.
Ukuthetha malunga nokushisa kwamanzi, sinokuthi kuphela loo nto iyodwa kwaye umntwana ngokwakhe kufuneka akhethe. Ngethuba lokuqala, umntwana osandul 'ukuzalwa kufuneka ahlambe emanzini obushushu malunga ne-36. 6 degrees Celsius. Ukuba kwenzeka njalo ukuba awunayo i-thermometer yamanzi, gcoba i-elbow emanzini, kuba kunzima kakhulu ukuyiqonda ngeminwe yakho kwaye ukuba itshisa okanye ibanda ifuna ukuba ubushushu bubulungile.
Emva kokungena ebhahleni, qaphela kakuhle umntwana, kuba abanye abantwana bathanda ukufudumeza ukufudumala, ngelixa ezinye ziba nzima. Kwaye ke ukushisa okungafanelekanga kungabangela ukukhala kunye neefom. Uyiqonda njani ukuba kubanda okanye kushushu kumntwana? Ukuba umntwana uyabanda, ngoko uya kuhlahlela ibhola kwaye unxantathu wakhe ongeyenalabial uya kuvulela okomhlaza kwaye emva kwexesha uya kuqala ukuthuthumela. Ukuba ngokuchaseneyo, uyatshisa, umntwana uya kuba lubala, ulusu lwakhe luya kubomvu, kwaye ngokuqinisekileyo uya kubhikisha ngokukhala nokukhala. Ukuba ungeyiphutha elincinane, kulungile, iipompo ngamanzi ashushu kunye abandayo asemfutshane, kwaye unokukwazi ukucwangcisa amanzi ngokulula. Kwaye ngenyanga uza kufunda indlela yokuchonga ngokuchanekileyo ukushisa kwamanzi okufunayo umntwana wakho.
Enye into ebalulekileyo ukuhlamba. Okokuqala, kufuneka kukhunjulwe ukuba akukho mfuneko yokuba kufuneka i-antibacterial agents isetyenziswe, kuba unokuphazamisa i-microflora yengqungquthela yendalo kunye nefuthe, eya kubakho ukuphuhliswa kwezifo ezibi. Ngokutsho kwe-dermatologists, isepha esiqinileyo esisemgangathweni kuya kuba yingozi kakhulu kwesikhumba esibucayi nesincinci somntwana. Inyaniso kukuba ekhumbeni lomntu kukho ifilimu ekhethekileyo yokukhusela. Kulo khuselo aluvumeli amanzi, umoya kunye nelanga ukuba nefuthe elibi kwesikhumba somntu. Kubantwana abasandul 'ukuzalwa le filimu yincinci. Izinto ezenziwe nge-alkaline eziqulethwe kwisepha ziyabhubhisa le miqobo yemvelo. Kwaye oko kuthetha ukuba umngcipheko we-ntsholongwane kwintsholongwane yolwaphulayo lukhula. Ngako oko, kungcono ukusebenzisa iindlela zanamhlanje ezinobulunga kwaye ezingenabundlobongela bokuhlamba. Iindlela ezinjalo azigcini nje kuphela ukuba zonakalise iigobolondo ezikhuselekileyo, kodwa zize zenze uncedo ekujonganeni nempembelelo enobudlova bendalo yangaphandle. Kuchaneka njani ukusebenzisa indlela yokuhlamba umntwana? Ukwenza oku, lungiselela amanzi uze uqiniseke ngeqondo elifanelekileyo lokushisa, udibanise i-agent ekhethekileyo yokuhlamba kwindawo yokuhlamba. Emva koko thabatha inani elincinci lentsiba uze ulisebenzise ngokukhawuleza kwesikhumba sakho somntwana. Ukuba loo mveliso ifanelekile iinwele, zihlambe kakuhle intloko yentsana nayo okanye isebenzise i-shampoo ngefomula ekhethekileyo.
Ngamanye amaxesha kuya kuba luncedo ukuhlamba umntwana ngokusetyenziswa kwezidibanisi ezahlukeneyo. Ezi zongeziweyo zibandakanya ityuwa yolwandle. Ukwenza oku, phucula le setyuwa epanini, uze uhlume ngeendlela ezininzi ze-gauze uthele ngaphambi kokuhlamba kwindawo yokuhlamba. Emva koko, emva kokuhlamba, galela umntwana kunye nohlobo oluqhelekileyo lwamanzi ukuhlamba ityuwa.
Kwakhona, ukubhukuda, iintlobo ezahlukeneyo zokulungiselela izityalo zikhulu. Ukuba umntwana wakho akaphumli, unokuhlamba kwisisombululo se-coniferous, kwaye xa kwenzeka iingxaki zesikhumba - ekungeneni kwe-élécampane kunye ne-sequin. Musa ukuhlamba umntwanakho kwi-infommile infusion, kuba ludaka ulusu, nangona njengenye yeengxenye ze-daisy iyamkeleka. Ngokuqhelekileyo, ukuba unquma ukuhlamba umntwana osanda kuzalwa kunye nemifuno, kungcono ukudibana nodokotela ngaphambili, kwaye uyakukunceda ukhethe udidi olufanelekileyo.
Kanye kubalulekile ixesha lokuhlamba umntwana wakho. Ngokwesiko, ngokuhlwa kusikhethwe oku, kodwa ngokwenene akubalulekanga. Kukho abantwana abaxhatshazwa ngokubhukuda, emva koko balele belele. Ukuba ubona impendulo enjalo kumntwana wakho, mhlawumbi kungcono ukuhlamba ekuseni. Wena njengomama onakekelayo kufuneka uqaphelisise iimpendulo zomntwana, kuba abanye emva kokubhukuda bezolile, abanye baqala "ukudlala amaqhinga", njl njl njl. Konke oku kuthatyathwa ngee-whims, kodwa ngokwenene yindlela yokusabela komntwana ehlobene iimpawu zesistim se-nervous kunye ne-physiology yengane. Ngokuqinisekileyo, unako "ukuphula" i-crumb kwaye wenze ngendlela yakho. Ngubani kuphela onokuzuza kulo?
Okubaluleke kakhulu ingqondo yomama, ngenxa yokuba umntwana uhamba ngokukhawuleza. Ngoko ke, ukuba ekuhlambuleni, into ephazamisayo, yalela ukuba izalamane zakho - uyise, ugogo okanye unina womntwana. Nangona kule nkqubo akukho ntoyikekayo kwaye iyothusayo kunye nexesha, ukuhlamba umntwana osandul 'ukuzalwa akuyi kukubangela naluphi na uhlobo lweemvakalelo ezimbi, kodwa luvuyo kunye noluncedo.
Iimpawu zokungabikho komzimba kwi-phosphates
Izixhobo zoncedo olubanzi kwiintsapho apho abantwana basebenzisa utywala, iziyobisi
Indlela yokuqinisa i-feng shui kwicandelo labesetyhini?
Ubungakanani besikhumba sengxaki
Kutheni umntu engathethekiyo xa ebudlelane nomfazi?
Uluhlu olumnyama lwe-filton okanye oko akufanele kube khona kwisikhwama sethu sokonkcenkceshela
Ukudibana namaSpartans (Hlangana namaSpartans) 2008
Ubundlobongela kwi-elevator - ukuzizonwabisa ngokugqithiseleyo